I nkwenkwezi Encyclopaedia of Stars
U-Keanu Reeves ungumdlali ongenakulibaleka, umboniso ongaqhelekanga kunye nomsebenzi womdlali ongezantsi. Wayebeka ngokuqinisekileyo kwindawo yakhe yamacandelo abalingisi bokuqala be-Hollywood, nangona ubomi obuqhelekileyo buvaliwe kwaye abufaneki nakwizinto eziqhelekileyo.
I-Biography yeKeanu Reeves
UKeanu Reeves wazalwa ngoSeptemba 2, 1964 eLebhanon. Indawo engafaniyo yokuzalwa ichazwa yinto yokuba uyise wayengu-geologist kunye nonina umdlali we-actress yemiboniso eyahlukeneyo, kwaye badibana noxa uyise ephumla kweli lizwe leArabhu. Yena ngokwakhe wayeneengcambu zesiTshayina nesiHawaii. Ukusuka kuye, u-Keanu wafumana amehlo omdaka obomvu, iinwele ezimnyama kunye nomthunzi ongaqhelekanga wesikhumba. Utata washiya intsapho xa le nkwenkwe yayineminyaka engama-6 ubudala, kwaye ukususela kweso sihlandlo sasingaqhagamshelana nendodana yakhe.
Unina wahambisa umntwana eCanada, apho akhula khona. Andizange ndiyigqibe isikolo sam, kuba kunomdla omkhulu kumidlalo yecaterari kunye neHockey. Umsebenzi wakhe wokuqala wokwenza umsebenzi wenziwa kwinqanaba lezemidlalo eToronto. I talente yenkwenkwe yaxatyiswa ngokukhawuleza. Kungekudala uqala ukubonakala kwiifilimu ezenziwa eCanada, kwaye ke uzama eHollywood.
Inxaxheba yakhe yokuqala ephumelele ngokwenene nguJack Traven in "Speed", yakhululwa ngo-1994. Nangona kunjalo, u-Keanu Reeves akafuni ukuhlala engxenyeni yeqhawe lamajoni. Ngomsebenzi wakhe, ezininzi iinkalo ezihlukeneyo, kunye nehlabathi eyaziwa ngokuba ngumdlali wendima ye-Neo kwi-trilogy trilogy "Matrix".
Ubomi bomntu kaKeanu Reeves abuzange buphumelele njengemisebenzi yefilimu. Umhlobo wakhe osenyongweni wafa eneminyaka engama-23 ngokugqithisa kweziyobisi. Babelindele umntwana kunye nentombazana yabo ethandekayo, kodwa ukukhulelwa kwakungeke kusindiswe, kwaye kungekudala yena ngokwakhe wabulawa engozini yemoto. Emva koko, uKeanu owayesethululanga waba ngumntu ozininzi. Abantu abasondeleyo nguDade Kim noMama.
Nangona kunjalo, bonke oogxa kwi-set, kunye nabadlali abaqhelekileyo abakhathali ukuthetha ngobubele nobubele. Akazange axoshe imali enkulu, kwaye wayesekulungele ukuhlukana nenxalenye yabo ithuba lokuba basebenze kunye noogxa abadumileyo. Uyaziwa ngezipho zakhe zobubele kwiinkcukacha eziqhelekileyo nezingathandekiyo kubantu abangaziwa ngokupheleleyo.
Yintoni ukuphakama nobukhulu beKeanu Reeves ngoku?
Abantu abaninzi bayaqaphela ukuba ixesha kunye nezilingo azizange zichaphazele ukubonakala kweKeanu Reeves. Usengumncinci kwaye u-taut, kwaye nangona uboya obomvu bokuqala abubonakala ezinweleni zakhe, ubonakala encinci kuneminyaka yakhe . U-Keanu Reeves unokukhula ngokukhawuleza - 186 cm, ubunzima bakhe bukufutshane nomqondiso we-84 kg.
Abalingisi abangama-11, obomi babo bashintshile ngonaphakade emva kwendima ebhayisikobho
Oku kungalingani neKeanu, okanye amaxesha angama-26 enza i-intanethi ihlezi iinyembezi ...
Ukhokela indlela yokuphila ebulinganisiweyo neyokuzola, okuyiyo, mhlawumbi, imvumela ukuba alondoloze intle yakhe imbonakalo ixesha elide.
UClaudia Schiffer ebusheni bakhe
U-Andrea Pežić ngaphambi nangemva kokuhlinzwa
UMichel Mercier - ukuphakama kwakhe, ubunzima kunye nemimiselo yemeko
Ukukhula kweAriana Grande
Umculi-transgender wamemezela ukuxhamla umvuzo we-Oscar
I-Supermodels ye-90 ye-Big Six
Ukukhula koKylie Minogue
UAdele ulahlekelwe isisindo!
USasha Peters uye watyala!
UJulianne Moore ebusheni bakhe
Oomama beNkwenkwezi 2015
Isisu sikaScarlett Johansson
Ubukhulu nobukhulu bukaEmily Rataskovski
UMelissa McCarthy ulahlekelwe isisindo!
Ukukhutshwa emva kokucoca umbele
Jonga iwashi-alarm clock
Iziqhamo ezingavumelekanga - kutheni kuhlala kukuhle?
Ama-eggplants kwi-oven ngokukhawuleza kwaye anandi-zokupheka izitya zangaphambili kuzo zonke iingubo!
Tattoos kwisitayela seSlavic
Izifo eziyi-14 ezenza umntu abe yi-monster
Iingcamango zendlela encinci
Iibhatyi eziphathekayo - ekwindla-ebusika 2016-2017
Usebenza Ngentsapho: UJennifer Garner kunye nabantwana kunye nomama baya kwi-marathon yemidlalo
Isambatho sesisekelo sehlobo ehlobo
Iipilisi ezisuka emlenzeni
Iimfucu zomvini ekhaya
Ingubo - Ukuwa 2015
Roll kunye nemifino
Iinkalo zengqalelo kwingqondo
15 abathembisa abadlali abaneminyaka engaphantsi kwe-30 ubudala
Ukususwa kwezandiso zetwele ekhaya
I-Cheese ithambile intlama